Te hahalala ny hatsaran'ny tranonkalanao ve ianao? & Ndash; Eny, Mihainoa Mihirà!
Te hahalala ny hatsaran'ny tranonkalanao ve ianao? - Eny, Mihainoa Mihirà!
Oliver King, ilay Semalt Mpitarika Success Manager, dia miteny fa maro no mino fa tsy manan-danja ny fampidirana ny tenany amin'ny Google Analytics, fa tsy izany. Ho solon'izany, hanome anao fahatsapana fiarovana amin'ny maha-tompona tranonkala azy na webmaster izany. Tao anatin'ny herinandro vitsy, nanandrana fomba maro hiantohana ny kalitao sy ny fahombiazan'ny tranonkalako aho. Tokony hitadidy ny maha-zava-dehibe ny fampidiran-tsainao Browser ianao, ny famoahana amin'ny ISP na ny IP, ary koa ny Opt-out amin'ny cookies.
Fanampin'ny tranokala fanitarana
Misaotra an'i Google satria ny orinasa dia namorona sy namolavola ny Add-ons amin'ny Google Analytics Opt-Out Browser mba hanamora ny asantsika - application and web development in Lebanon. Tsy mety ny milaza fa io no iray amin'ireo fomba haingana indrindra sy tsotra indrindra hanombohana ny fanakànana ny fomba fijerinao manokana sy ny fanampim-panazavana ao amin'ny Google Analytics. Tsy maintsy mifantoka amin'ny safidin'ny bureau sy browser ianao ary tsy tokony handeha miaraka amin'ny Internet Explorer. Tamin'io dia nilaza aho fa manana fepetra sasantsasany amin'ity fomba fiasa ity..Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra dia ny fanampiana; Tiako izy ireo hanaiky ny fifamoivoizana an-tanindrazana avy amin'ny fitaovana finday sy ny solosaina. Hatreto, tsy vitako ny manao izany, fa mbola mijery teknika maromaro aho. Plus, ireo tafika fanampiny dia tsy hanaisotra anao amin'ny tatitra rehetra Google Analytics satria manandrana manova fanovana lehibe ianao
Nanafaka tamin'ny ISP / IP
Mba hisorohana amin'ny alalan'ny ISP na IP dia tokony miditra ao amin'ny kaonty Google Analytics ianao ary tsindrio ny safidy admin. Eto dia tsy maintsy misafidy ny kaonty ianao amin'ny safidin-tsetroka ary tsindrio ny bokotra filtre. Ataovy azo antoka fa nesorinao daholo ireo rakitra tsy fantatra sy tsy fantatrao avy amin'ity lisitra ity; Raha tsy izany dia tsy maintsy miatrika olana sasany ianao. Avelao aho hilaza aminareo eto fa tsy mahomby toy ity fomba ity ny fomba; Na dia izany aza, dia mbola ampiasain'ny webmasters maro eran-tany izy io ary mora ampiasaina. Ny tombony amin'ity fomba ity dia ny hanaisotra ireo IP sy ISP avy any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, ary tsy mila manova ny solosainao na ny solosaina ianao. Manampy anao ihany koa ny fanivanana ny anaran'ny sehatra, izay manome antoka ny kalitao amin'ny fifamoivoizan'ny tranonkala.
Mialà amin'ny cookies
Vao haingana aho no nametraka ny cookies tao amin'ny tranonkalako mba hamoronana angona azo antoka satria tsy maintsy ho an'ny tranonkala rehetra izany. Afaka miasa amin'ny fitaovana finday rehetra sy ny solosaina rehetra izy, manome ny vokatra tsara sy mahatalanjona indrindra. Matetika i Google dia manavao ny politikany, ny fepetra, ary ny fepetra mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny toetoetrany sy ny fenitry ny Google Analytics. Avelao aho hilaza aminao fa ny tranokalako dia mibaribary, izay midika fa tsy manana sehatra maro izy io ary mora ny miditra amin'ny fitaovana finday na solosaina. Vao haingana aho no niova UA-XXXX-Y tao amin'ny Google Analytics ID ary nahazo valiny tena tsara. Ankehitriny dia faly aho mahita fa mitondra fiara be dia be amin'ny tranokalako izany ary ny fomba fijery rehetra dia avy amin'ny olona tany am-boalohany fa tsy ny bots.